मुटुरोग खानपान र जीवनशैलीका कारण बढ्दैछ « aamsanchar.com , aamsanchar
मुटुरोग खानपान र जीवनशैलीका कारण बढ्दैछ
पहिले पहिले मुटुरोगलाई पाका मान्छेहरुको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवाअवस्थाकै मानिसहरुमा समेत डरलाग्दो गरि फैलिएको पाइन्छ । मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । यसको उपचार अब झापाको बिर्तामोड स्थित बीएण्डसी टिचिङ्ग हस्पिटलमा पनि सुरु भएको छ । पूर्वमा मुटु रोगको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरु छैनन् अब बीएण्डसीमा सुरु भएको छ । मौकाको फाइदा उठाउनु होला आफ्नो मुटुको जानकारी लिनका लागी वर्षमा एक पटक आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच गराउनै पर्छ । मुटु रोगको अवस्था र बीएण्डसी हस्पिटलमा सुरु भएको उपचारको विषयमा बीएण्डसी हस्पिटलका मुटु रोग विशेषज्ञ(डीएम कार्डियोलोजिष्ट) डा.राजेश पञ्जियारसंग आमसञ्चार डट.कम.का नरेन्द्र ढकालले गरेको कुराकहानीको सम्पादित अंश–
तपाईको आगमनसंगै बीएण्डसीमा मुटुरोगको उपचार सुरु भएको छ । बीएण्डसीमै किन आउनु भयो ?
– मुटुरोगको उपचार गर्ने विशेषज्ञ डाक्टर पूर्वमा नभएको र पूर्वका बिरामीलाई लषित गरेर म यहाँ आएको हुँ । मुटु रोगको विषयमा डीएम कार्डियोलोजिष्ट गर्ने हामी थोरै मात्र डाक्टर रहेका छौं । सबै मेरा साथीहरु हुन् । उनीहरु कोही राजधानीका अस्पतामा छन् भने कोही चितवन, लगायतका जिल्लामा रहेका अस्पतालहरुमा कार्यरत रहेका छन् ।
पूर्वमा मुटुरोगको विषयमा उपचार गर्ने डीएम डाक्टर नभएकाले मैले बीएण्डसी हस्पिटललाई रोजेको हुँ । यस अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले झापामा नै सबै रोगको उपचार गर्ने हिसाबले सञ्चालनमा ल्याउन भएको अस्पतालमा मुटु रोगको उपचार प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै म आएको हुँ ।
बीएण्डसीमा अब मुटुरोगसम्बन्धी के कस्ता सेवा उपलब्ध हुन्छ ?
– बीएण्डसीमा यसअघि पनि समानय उपचारहरु नभएका होइनन् । उपचार भइरहेका छन् । अब भने मुटुको इको, इको कार्डियोलोजी, हल्टर, टिएमटी लगायतका उपचार सुरु भएको छ । यसले आफ्नो मुटुको अवस्था के छ ?, मुटुमा कुनै समस्या भए नभएको जानकारी पाउनुका साथै कुनै समस्या भइहालेमा तत्कालै उपचार पनि गर्न सकिन्छन् । हामीसंग सबै उपकरणहरु उपलब्ध भइसकेका छन् । यसले गर्दा मुटु रोगहुनेहरुले एक पटक आफ्नो स्वास्थयको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुने छ ।
काठमाडौंमा हुने मुटु रोग उपचार र बीएढडसीमा हुने हुने उपचारको स्तर कस्तो हुन्छ ?
–यहाँका मानिसलाई लाग्ने रोग र काठमाण्डौंका मानिसलाई लाग्ने या संसारका जुनसुकै स्थानका मानिसलाई लाग्ने मुटुरोग एकै किसिमको हो ।त्यसैले काठमाण्डौंमा हुने उपचार र यहाँ हुने उपचार पनि एकै किसिमको हुन्छ । काठमाण्डौंमा मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने धेरैको भ्रम हुन सक्छ । जहाँ गएपनि उपचार विधि र प्रक्रिया एउटै हो ।
मुटु रोगको उपचार गर्ने डीएम कार्डियोलोजिष्ट डाक्टरले नै हो त्यहाँ पनि उपचार गर्ने म पनि त्यही डाक्टर हुँ । यहाँ उपचार गर्ने । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् । यदि उपचार पद्धति र उपचार प्रक्रियामा कुनै फरक पाउनु हुन्न । त्यसैले म यहाँको सञ्चारमाध्यम मार्फत सबैसंग आग्रह गर्न चहानछु एक पटक उपचारका लागी आउनुहोस् निरास हुनुपर्ने छैन् ।
तपाईको अध्ययन र विशेषज्ञताको बारे बताईदिनु न ?
– मैले स्न २००२ देखि २००७ सम्म स्कलरसिपमा बंगलादेशमा गएर अध्उउन गरे । त्यसपछि हस्पिटलमा केही समय काम गरे । लगत्तै अध्ययनलाई निरन्तरता दिदैं मैले भरतपुर मेडिकल कलेज चितवनमा सन् २०१०–१३ सम्म अध्ययन गरेर एमडी भएँ । छोटो समय त्यहाँपनि काम गरे । तर मुटु रोगको विषयमा यतिले मात्र पुग्छ जस्तो लागेन र अध्ययनलाई निरन्तरता दिदैं मैले सोही अस्पतालबाट सन् २०१७ मा डीएम कार्डियोलोजिष्ट भएँ ।
अर्थात म मुटु रोगको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सफल भए । त्यसपछि भरतपुरमा नै रहेर काम गरिरहेका बेला दुर्गासरसंग सक्पर्क भयो । पूर्वमा मुटुरोग सम्बन्धि डाक्टरहरु नभएको पाँए र म यहाँ मुटु रोगको सेवा दिन आएको हुँ ।
तपाई डीएम कार्डियोलोष्टि । तर यहाँ एमडी मात्र गर्नेले पनि विशेषज्ञ भनेर प्रचार गरेका छन् नि ?
– विगतमा नेपालमा मुटु रोगको विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टरहरु धेरै थोरै मात्र थिए । अर्थात डीएम गर्नेहरु त छदै थिएनन् भन्दा हुन्छ । त्यो अवस्तामा सिमित रुपमा रहेका एमडीहरुले नै मुटुरोगको उपचार गर्ने गरेका थिए । त्यो समयमा उनीहरुले गरेको सेवाको सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हो । हुदै नहुनुभन्दा त छ भन्ने हुदाँ पनि धेरै हुन्छ ।
त्यसैले त्यो समयमा एमडी गरेकाहरुले आफु नै मुटुरोग विशेषज्ञ भन्ने गरेका हुन सक्छन् । तर अब उनीहरुले पनि सोच्न जरुरी छ मैले कति अध्ययन गरेको छु मेरो विषेशज्ञता के हो भनेर । अब नेपालमा डीएम गरेका चिकित्सकहरुको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । वर्षमा नेपाल आफैले ६–७ जना डाक्टरको उत्पदान गर्न थालेको छ । जो चिकित्सकहरु कुनै एक विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् ।
त्यसैले एमडी मात्र गरेर अब चिकित्सकसाथीहरुले आफुलाई विषेशज्ञ भन्नु चाँही भ्रमको खेती हुन्छ । यो विषयमा बेलैमा साचेर आफुलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । तपाईको एउटा भ्रमले गर्दा हजारौं विरामी ठगीन सक्छन् त्यसैले आफुलाई विषय विज्ञता तर्फ डोहो¥याउन जरुरी छ ।
अहिले मुटु रोगीको अवस्था कस्तो छ ?
– पहिले पहिले मुटुरोगलाई पाका मान्छेहरुको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवाअवस्थाकै मानिसहरुमा समेत डरलाग्दो गरि फैलिएको पाइन्छ । मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । प्रायः गम्भीर अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै आफुलाई मुटुरोग रहेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, केही लक्षणहरुको आधारमा ।
यदि त्यस्ता लक्षणहरु देखिए र उपचार तर्फ लागियो भने मुटुरोगबाट ज्यान गुमाउनुपर्ने जोखिम घट्ने छ । तर मुटुरोगको प्रारम्भिक अवस्थामा उपचार नगर्ने र रोग छिप्पिँदै गएपछि भने त्यसको उपचार पनि कठीन र बढि महंगो समेत हुन्छ । त्यसरी कतै आफुलाई पनि मुटुरोग पो छ की ? भनेर सचेत बन्नुपर्छ । वर्षमा एक पटक भएपनि आफ्नो स्वास्थ्यको जाँच गराउनु पर्छ । अब काठमाण्डौंसम्म जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यसले गर्दा तपाईको मुटु कस्तो छ भन्नका लागी एक पटक जाँच गराएर आफुलाई ढुक्क बनाउनु होला ।
– पछिल्लो समय बढेको मुटुरोगको समस्याको एउटै कारण हो । खानपान, ब्यस्त जीवनशैली, तनाव, रहनसहन हो । हामी जतीधेरै परि?म गछौं । त्यसले हामीलाई स्वास्थ्य बनाउन मद्धत गर्छ । एक सातामा तपाई ४ दिनपनि आफ्नो शरीरबाट पसिना आउने गरी काम गर्नुहुन्न वा शारीरिक ब्याम गर्नुहोनन् भने तपाईको स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै जान्छ । यो कुरा बुझन जरुरी छ ।
एक तपाई तारेको, मुटेको, चिल्लो मात्रा भएको र मादक पदार्थ तथा धुम्रापान गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईको मुटुलाई गम्भिर असर परिरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा पछिल्लो समय युवा अवस्थाका मानिसहरु पनि मुटु रोगको जोखिममा पर्दै गएका छन् । पछिल्लो समय ह्दयघात धेरै हुनुको कारण पनि यहि हो त्यसलै आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा बेलैमा सोचन जरुरी छ ।
स्वास्थ्य मुटुका लागी के गर्नुपर्छ ?
– साधारणतयाः मुटुका मांसपेशी र यसको कार्यक्षमता ३० वर्षको उमेरपछि कम हँुदैं जान्छ । यस्तो घट्ने क्रम कम गर्नका लागि शारीरिक गतिविधि बढाउँदैं लैजानुपर्छ । हामीलाई के कुरा थाहा छैन भने उमेर बढ्दै गएपछि हामी कति निष्क्रिय हुन्छौं । उमेर, सम्पत्ति र पेशागत कुरा बढ्दै गएपछि शारीरिक रुपमा हामी कार्यालय तथा घरको दैनिक क्रियाकलापमा निष्क्रिय हुँदैं जान्छौं । त्यसैले हामीले क्यालोरी नष्ट गर्न उपयुक्त कोशिस गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो दैनिक जीवन व्यायामसहितको क्रियाशिल हुनुपर्छ । नियमित व्यायामले रगतको कोलेस्टेरोल, ट्राइग्लिसराइड्स, मधुमेह तथा रोगका अन्य कारण तत्वहरु घटाउँछ ।
नियमित खाना खानु स्वास्थ्यवद्र्धक खानाको महत्वपूर्ण भाग हो । दिनभरिमा कम्तीमा ५ पटक थोरै थोरै खाना खानुपर्छ र खान कहिल्यै पनि छाड्नुहुँदैंन । खाना छाड्नेले त्यसपछिको खाना खाँदा धेरै खाने सम्भावना बढी हुन्छ । जहिले जहाँ पायो त्यहाँ खाएको भन्दा योजनाबद्ध तरिकाले समय समयमा खाएको खाना बढी सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको खानपान र जीवनशैली हो त्यसलाई सुधार गर्नुहोस् । तपाई सधैं स्वास्थ्य रहनसक्नु हुन्छ ।